Intergenerational ny Fifandraisana ao Filipina
Raha misy mpitsidika ny Filipina voalohany mahita ny taona olona tamin’ny roa amby roa-polo taona Filipina izy ireo no mety ho tezitra. Raha izany no tanteraka ohatra, dia mety tsy nampoizina ireo mpitsidika mba hahita fa izany intergenerational mpivady efa nanambady nandritra ny efa-taona. Raha toa isika ka mijery indray miaraka amin’izany koa ny mpivady enin-taona izao, dia mety ho fankalazana ny folo taonan’ny fampakaram-bady. Izay no tena mahazo manakaiky ny eo ho eo ny halavan’ny ny fanambadiana eo amin’ny olona mitovy taona ary mbola taona fihatsaram-belatsihy mbola misy eo amin’ny fiaraha-monina maro. Sarotra ny mametraka ny isa ny taona eo ho eo gap, fa ity mpanoratra dia nanatrika ny antoko vao haingana tao Filipina izay ny vahiny no voalohany indrindra intergenerational mpivady. Ny eo ho eo ny taona isaky ny lehilahy vady dia tokony ho enim-polo taona. Ny eo ho eo ny taona ny vavy mpivady dia tokony ho dimy amby roa-polo taona. Ny tombana ny eo ho eo ny halavan’ny ny fanambadiana (na miaina ao anatin’ny fiaraha-miasa) dia ny momba ny dimy taona. Avy izany dia afaka maminavina fa ny Iray amin’ireo mpitsidika ny antoko dia ny Amerikana lehilahy iray izay nisy afa-tsy telo-polo taona. Izy dia naneho hevitra fa ny zokiolona vadiny dia efa milalao cribbage amin’ny ambony foibe raha izy ireo no teo amin’ny ANTSIKA. Hoy izy hoe: izy dia talanjona nahita ireo lehilahy ireo, izay monina any Filipina amin’ny tanora be ny vady, ny fiainana lehibe sy miandraikitra. Vahiny maro ireo olona izay ao amin’ny fararano ny taona izay no natera-dray ny tsirairay ny ankizy amin’ny Filipiana hatsaran’ny izay mbola ao amin’ny lohataona ny fiainana. Ireo ankizy ireo dia fifandraisana tena manan-danja amin’ny fiaraha-monina Filipina. Izany voalaza teo dia mety ho avo fa ny ray dia ho levona talohan’ny ny ankizy tonga olon-dehibe. Na dia mety ho marina aza, misy tsy mitsaha-mitombo dia azo inoana fa izany koa-taona ny fanambadiana dia tsy haharitra mandra ny zaza nora. Tanora sasany hoe ‘ray’ tsy dia hitoetra mandra-ny zaza teraka sy ny ankizy fanohanana dia tsy avo momba ny laharam-pahamehana. Ny zanaka dia iray amin’ireo antony mahatonga ny tanora vehivavy tia tena matotra ny olona. Tsy ny rehetra matotra ny olona afaka manana ankizy. Ny tena mahazatra ny antony dia vasectomy tany am-boalohany eo amin’ny fiainana. Ny olana toy izany no efa voavaha ny vasectomy izany fiovan-javatra, ny solon-insemination, fananganan-jaza, na ny nahita ny vehivavy iray izay efa manana ankizy. Ny sasany-Taona elanelana mampiaraka dia fomba ara-dalàna mba hahitana fifandraisana lehibe. Manao ny tanora ny vehivavy hanao antso ho anao? Moa ve ianao vonona ny hiatrika ny fitsarana an-tendrony? Raha toa ka nataonao eny ny valin na fanontaniana, dia tokony hiezaka intergenerational mampiaraka. Kolontsaina tandrefana matetika mampiseho taona ny fitsarana an-tendrony. Misy ny toe-tsaina fa ny olona antitra dia tokony hisotro ronono tany am-boalohany mba aoka ny tanora manana ny asa. Ny olona antitra dia tokony ho ny ambony center milalao cribbage.
Ny lehibe ny ankizy avy ny olona teo aloha ny fifandraisana matetika no mieritreritra fa dada ny asa ankehitriny dia mba hitafatafàna sy ny fiarovana net, raha mitady taorian’ny grandkids rehefa nanontany. Ireo rehetra ireo dia mendri-piderana ny fikatsahana fa rehefa ny olona mbola manana ny fahasalamana sy ny tanora toe-tsaina tsy misy antony marim-pototra dia afaka hanomboka indray ny tanora mpiara-miasa. ianao dia tsy maintsy miatrika ny fitsarana an-tendrony. Ny olona sasany mihevitra izy ireo dia ny voalohany dia milaza:»fa ny Raiko.». Ny olona sasany dia tena mangataka fanazavana mikasika ny zavatra mahatonga ny. Maka ny fotoana mba hanabeazana ireo olona ireo. Ho an’ny hafa kosa, ny tsara indrindra valiny matetika dia odian-tsy hita ny adala na ny tsiky sy ny soso-kevitra izy, na dia tsara ny andro. Izany dia tsy azo atao foana ny tsy hiraharaha azy ireo. Misy ny adala dia hahazo tsara eo amin’ny tarehiny sy ny fitakiana ny hahafantatra ny fomba taloha ny olon-tiany sy ny fomba taloha ianao. Raha toa ka tsy afaka manaikitra ny molotra ary aoka ho solafaka ianao dia hanana be dia be ny adin-tsaina hiatrika nandritra ny taona maro. Miezaha ny mahita ny vondrona ara-tsosialy ny mitovy hevitra ny tsirairay mba hiainana sy manana mihomehy ny momba izany. Misy fotoana maro eo amin’ny fiainana, raha ny olon-dia»efa misy ny atao hoe», ary manana ny traikefa ny hahafantatra raha ny zavatra tsy miasa. Iray dia matetika mahita izany ho toy ny ratsy ary tsy te-hanandrana zava-baovao. Izany dia zava-dehibe mba hahita ny fifandanjana ara-pahasalamana rehefa mba aoka ny tanora mpiara-miasa ho azy manokana ny fahadisoana ary rehefa manaiky fa ny zokiny sy hendry mpiara-miasa dia mety tsara. Ny firaisana ara-nofo filan’ny dia mitovy amin’ny taona. Rehefa nandeha ny fotoana dia hahatsikaritra fa tanora kokoa ny olona dia manana fananahana matanjaka kokoa noho ny fiara ilay zokiny iray. Misy fahamarinana ao ny teny hoe»mampiasa izany na hahavery azy». Ny be taona ny olona nahita fa ny firaisana ara-nofo dia tahaka ny hafa ny fanatanjahan-tena, rehefa mitandrina mavitrika foana ny fahaizana mitandrina ny fanaovana izany. Fanafody orinasa efa nanome antsika fanafody maoderina toy Viagra ary misy ny firaisana ara-nofo kilalao izay azo ampiasaina amin’ny alalan’ny ireo izay mila fanampiana bebe kokoa. Izany no zava-dehibe ho an’ny be taona ny olona hanolo-tena ny tenany ny ramatoa ny fahafinaretana ara-batana.
Raha tsy izy, dia mety hahita olona
Hisy ny faneren’ny fianakaviana miatrika. Amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra, ny fianakaviana ny Filipina dia ho manohana ny intergenerational fifandraisana. Izany dia vahiny ny olona ao amin’ny fianakaviana izay no miteraka olana. Fianakaviana maro no efa nolavin’ny vahiny ny olona izay nifidy ny hifindra any Filipina ho amin’ny tanora vadiny. Lehibe ny ankizy miahiahy ny vaovao vadiny dia miezaka handray ny lovany. Ny fahanterana ny ray aman-dreny miahiahy ny zanaka dia ao ny faharoa dia ny fahazazany. Ry rahalahy dia tezitra, satria ny vadiny dia foana ny miresaka momba ity ‘efa nivadika’ ny fifandraisana. Izany no zavatra tsy maintsy miomana hiatrika alohan’ny hidirana ny intergenerational fifandraisana. Taona-ny hantsana eo amin’ny fiarahana dia fomba ara-dalàna mba hahitana fifandraisana lehibe. Manao ny tanora ny vehivavy hanao antso ho anao? Moa ve ianao vonona ny hiatrika ny fitsarana an-tendrony
← Filipiana Dating Site - ny Fiarahana amin'ny Aterineto tao Filipina Filipiana Mampiaraka
Mahafinaritra ao Filipina, ny rosiana ao Filipina →